Antony 10 hampiasa rindrambaiko Maimaimpoana amin'ny fikarohana | Avy amin'ny Linux
Antony 10 hampiasa rindrambaiko Maimaimpoana amin'ny fikarohana
Araka ny vakiany ity lahatsoratra ity dia niseho tao amin'ny Biraon'ny lozisialy maimaim-poana ao amin'ny Oniversiten'i Granada rindrambaiko maimaimpoana dia tsy maintsy mahatratra ny andrim-panjakana rehetra fa amin'ny ireo natokana ho an'ny fikarohana dia tokony ho lohalaharana. Fa maninona?… Manome antsika antony 10 hotanisainay lisitra izy ireo.
1. Ampitomboy ny kalitaon'ny fikarohana vokatr'izany, amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny fiaraha-miasa tampoka (ary altruistic)
2. Mamporisika fiaraha-miasa eo amin'ny samy mpampianatra
3. Avereno ny fiarahamonina ny zavatra natambolan'ny fiarahamonina tamin'ny famoronana fahalalana avy amintsika.
4. Mamorona fantsona hafa ho an'ny fanaparitahana fikarohana manokana.
5. lasa izay ampahibemaso sy patanty ho an'ny orinasa sy vondrona hafa ny fahalalana sy ny zavatra niainan'ny vondrona iray
6. Mitondra siansa amin'ny besinimaro, amin'ny fiarahamonina, ary manatsara ny fahitana ny oniversite
7. Mamorona fiaraha-monina manodidina vondrona iray, ary mitombo ny fahalianana amin'ny siansa.
8. Mampiroborobo fanao tsara amin'ny fampandrosoana rindrambaiko.
9. Siansa tsy siansa izany raha tsy azo averina: mamoaka ny rindrambaiko mamela na iza na iza hilalao azy.
10. Lozisialy maimaim-poana dia a fiara mifindra fahalalana.
Raha ny tena izy, raha ny tokony ho izy, tsy ny rindrambaiko ihany no tokony "hisokatra" fa ny fikarohana siantifika sy ny zavatra hita ihany koa. Raha tsy izany dia mitranga ny zavatra toy izao: 20% -n'ny gnolombelona no nahazo patanty.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Antony 10 hampiasa rindrambaiko Maimaimpoana amin'ny fikarohana
Misaotra nandefa ahy ity lahatsoratra ity. Mianatra ao amin'ny Oniversiten'i Granada aho ary ny marina dia ao amin'ny mpampianatra ahy dia manohy mampiasa windows izy ireo amin'ny solosaina rehetra, na dia manana an'io birao rindrambaiko malalaka malalaka miaraka amin'ny olona liana io aza izy ireo dia manohy toy ny ondry. Nividy lisansa Windows 7 izy ireo tato ho ato fa tsy mampiasa mpianatra sy mpampianatra hanomana Linux… mahamenatra. Handefa taratasy any amin'ny rector ao amin'ny Oniversite miaraka amin'ity zavatra ity aho mba hieritreretany an'io.
Ovay amin'ny Espaniôla ny Open Office sy Firefox